Oromoon baratee fi Albeen qara lamaa tokkuma! (Gumaacha Jen.Taddasaa Birruu) …Bilisummaa Kumaa’tiin – Beekan Guluma Erena
Oromoon baratee fi Albeen qara lamaa tokkuma! (Gumaacha Jen.Taddasaa Birruu) …Bilisummaa Kumaa’tiin	Beekan Erena
Poems June 11, 2016OROMO
291SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Oromoon baratee fi Albeen qara lamaa tokkuma!
(Gumaacha Jen.Taddasaa Birruu)
Dur,akka har’aa kana uummanni Oromoo hin baratiin gitni bittoota alagaa(habashoonni) mataa isaanii ol qabatanii adeemuun uummata hedduurratti of tuulaa turaniiru. Haa ta’u malee isaan of tuulanis Oromoon of tuulummaa jaraa hin dhageenye,irra deddeebiidhaan saboonni biroo bittaa isaanii jala yeroo dheeraaf turuun dhiitamaa turanis Oromoon harka kennuu diduun gootonni keenya hedduun aarsaa hangana hin jedhamne uummata Oromoo,Oromiyaaf fi Oromummaa isaaniif kaffalanii dhaloota har’aaf Bu’uura gaarii Afaan,Aadaa fi Seenaa Uummatichaa kabachiisuun har’as dhaloonni amaaas hin bitamnu jechuun mormii isaa qabatamaan dhageessisaa jira!
Amma uummanni Oromoo barateera,ofis bareera! Uummanni Oromoos yeroo kamirrayyuu caalaa akka of baruu fi Waliif nahu,waliin dhaabatu,tokkummaan falmatuu fi dhimmi Ummata Oromoo dhimma gandaa,laga gamaa gamanaa,dhimma aanaa tokkoo,dhimma godina tokkoo yookaan dhimma nama dhuunfaa tokkoo otoo hin taane dhimma Oromiyaaf Oromooti jechuun Tokkummaan akka falmatan kan godhes Uummanni Oromoo cichoominaan uummata biyyattii kamiyyuu caalaa barachuusaati!
Barachuu uummata Oromoof ammoo bu’uura hin jigne,Utubaa hin cabne,Ajjerraa hin moofofnee fi dhoobbaa hin buqqaane dhaabuun seenaa barachuu uummata Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabu gooticha Oromoo jaalatamaa,eebbifamaa fi Abbaa dhugaa oromoo,Gooticha burqaa salaalee: Jeneraal Taaddasaa Birruudha!
Har’a lubbuudhaan jiraachuu baatusa,Jeneraal Taaddeen Birruu sanyiin inni facaase har’a miiliyoonaan wal horee,lafarra dhangala’ee addunyaarrattuu uummata ajaayibaa ta’ee kaayyoon inni wareegameef karaa qabatee uummanni keenya baratee Dorgomaa hayyuuwwan addunyaa ta’aniiru,ta’aas jiru!
Seenaan beeku keessatti Jeneraal Taaddasaan Birruu bara 1950’mmoota keessa yeroo ministeera barnoota biyyattii turetti Muumicha ministiraa Itiyoophiyaa yeroo sanaa kan ture Akliluu Habtawald Taaddasaan Birruu uummanni Oromoo akka baratuuf kakaasaa kan jiru dhagahuun gaafa tokko mana isaatti irbaata affeeruun irbaata nyaachaa otoo jiranii ministirichi “Taaddasaa!,ati uummata hundaan har’as,kaleessas,dheengaddas… baradhaa jetta.Keessattuu Oromoon akka galaanaa baay’ata. Uummanni kun barate jennaan akka galaanaa nurra garagalaatii dubbii kana dhaabi! Uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti.Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 ol nutti fudhateera.Ati isa abbootiin keenya waggoota 100’f itti dhama’an kana guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf jirta!…yoo baratan lammiileen kun nuuf hin ajajaman waan ta’eef barnoota dhorkuun gaaffii mirgaa akka hin gaafanne waan godhuuf wanta kana otoo irraa of qusattee!…isa baradhaa…baradhaa… jettu kanas of eeggadhu!” Yoo jedhuun miirri Taaddasaa Oromoo dhiigaa ture yeruma sana fuullisaa cilaatta’ee aaruun irbaata isaaf dhiyaate dhiisee biraa bahe. Taaddasaanis mirga uummata Oromoof qabsaa’uu itti fufe,Uummannj Oromoos akka baratuuf falmaa erga tureen booda Uummatumasaaf wareegame!…awwaalchasaa daadhiin haa guutu!
Anis waa malee kana hin kaasne! Eeyyan,baranneera,walis barsiifneerra. Amma booda garuu irree tokkoon kaanee diina arraba ibiddaa nuuf qopheesse,albee ittiin foon keenya jaji’uuf qaratan,rasaasa ittiin nu daguuganii biyya keenya dhaaluuf qopheeffatanii fi kiyyoo qabee hin lakkisne Oromoof ol kaayan mara isaanitti garagalchinee abbaa biyyaa akka taanu shakkii hin qabu!
Bakkeewwan tokko tokkottis, keessayyuu baadiyyaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti hanqinni barnootaa waan jiruuf, warri barachaa jirtan isaan bukkee dhaabachuun gara mana barnootaa akka deemaniif jajjabeessuu fi bira akka dhaabattan gamanumaan kabajaan isin gaafanna!
Haamilee kufte kaasa
Sammuu bilisoomsa!” Jedhe Dr.Art. Alii Birraan!
Egaa kana booda Oromoon barate Albee qara lamaati!
Yoo tokkoon doome tokkoon…jechuun,yoo karri karaa
Tokkoon itti cufame karaa biraan karri banamee Oromoon abbootii aangoo balaa nyaachisee ittiin taphata!
Kanaaf: haa barannu,haa barsiifnu!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa291SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GADAAMOO MOOTUMMAA? ንጉሤ፣ ነጋሲ፣ ነጋሽ፣ ነገሰ፣ ንግስት፣ ንግስቲ፣ ኣንገሶም፣ ኣንገሰት፣ መንግስቱ፣ መንግስቴ፣ መንገሻ ( Gadaa, Gadooma, Gadoomsa, Gadeessa, Gadaanbiyya, Gadaalessa, Gadmaya) Boruu Barraaqaatiin
LIQIXOOFTEE HIN HAFTU-Sabaan-boon Firrisaa →